ရှေ့နေဆိုသည်မှာ သင့်အား ဥပဒေနှင့်သက်ဆိုင်သောကိစ္စရပ်များတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်နိုင်ရန်အတွက် ဥပဒေ ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များကို လမ်းညွှန်ပေးနိုင်သော အရည်အချင်းရှိသည့် ကျွမ်းကျင်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါသည်။
ဥပဒေရေးရာ စာရွက်စာတမ်းများရေးဆွဲပြင်ဆင်ခြင်း၊ အမှုအခင်းများရင်ဆိုင်ခြင်းအစရှိသည့် ဥပဒေနှင့်သက်ဆိုင်သော ကိစ္စရပ်များတွင် ကိုယ်စားပြုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါသည်။
ရှေ့နေများသည် ပွဲစားအဖြစ် ဆောင်ရွက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင်လာဘ်ပေးလာဘ်ယူပြုလုပ်ခြင်း၊ ဥပဒေ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများတွင် ဥပဒေနှင့်ဆန့်ကျင်သော မသမာသည့်နည်းလမ်းများကိုဆောင်ရွက်သည့် ရှေ့နေသည် ၎င်း၏ ရှေ့နေ လိုင်စင် ရုပ်သိမ်းခံရနိုင်သည့်အပြင် မလျော်ကန်သည့်အပြုအမူများကြောင့် ရာဇဝတ်ကြောင်းဖြင့်ပင် တရားစွဲဆိုခံရနိုင် ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဓိကအားဖြင့် ရှေ့နေအမျိုးအစား နှစ်မျိုးရှိပါသည်။ ၎င်းတို့မှာအထက်တန်းရှေ့နေနှင့် တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေတို့ ဖြစ်ပါသည်။ ပိုမိုလေ့လာနိုင်ရန်အတွက် မေးခွန်းနံပါတ် ၃ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေနှင့်အထက်တန်းရှေ့နေ မည်သို့ကွာခြားပါသလဲ? ကိုကြည့်ပါ။
၂။ ရှေ့နေအစား လမ်းပြအက်ပလီကေးရှင်းကို သုံးလို့ရပါသလား?
ယခုအက်ပလီကေးရှင်းသည် ဥပဒေနှင့်ဆိုင်သော ယေဘူယျသတင်းအချက်အလက်များကိုသာ ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီ၏ အခွင့်အရေးများ၊ တာဝန်များသည် အမှုဖြစ်စဉ်အမျိုးအစား၊ ပကတိသီးခြား ပေါ်ပေါက် နေသော အချက်အလက်၊ အခြေအနေများပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားသွားနိုင်ပါသည်။
ယခုအက်ပလီကေးရှင်းသည် ရှေ့နေများကို အစားမထိုးပါ။ ယခုအက်ပလီကေးရှင်းသည် အသုံးပြုများကို အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်မှုကိုလည်းကောင်း၊ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောရလဒ်များကိုလည်းကောင်း ပေးလိမ့်မည် မဟုတ်သကဲ့သို့ ပေးနိုင်စွမ်း လဲမရှိပါ။
ရှေ့နေတစ်ဦးအနေဖြင့်မိမိအမှုသည်၏အမှုဖြစ်စဉ်တွင် သီးခြားပေါ်ပေါက်လျှက်ရှိသော အချက်အလက်မူတည်ပြီး ဥပဒေကို အသုံးပြုနိုင်သကဲ့သို့ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အချက်များနှင့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ရလဒ်ကို အကြံပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သင့်အနေဖြင့် အရည်အချင်းပြည့်မီသော ရှေ့နေထံမှသာ ဥပဒေအကြံဉာဏ် ရယူ သင့်ပါသည်။
တရားရုံးအမှုအခင်းများတွင် သင့်အတွက် တိုက်ရိုက်ကိုယ်စားပြုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် ရှေ့နေလိုမည်ဖြစ်ပါသည်။
၃။ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေနှင့်အထက်တန်းရှေ့နေ မည်သို့ကွာခြားပါသလဲ?
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဓိကအားဖြင့် ရှေ့နေအမျိုးအစား နှစ်မျိုးရှိပါသည်။
အထက်တန်းရှေ့နေဆိုသည်မှာ မြို့နယ်နှင့်ခရိုင်အဆင့်တရားရုံးများတွင်သာ လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသော ရှေ့နေများ ဖြစ်ပြီး ရှေ့နေလိုက်သူများအက်ဥပဒေ (၁၈၇၉) ကို လိုက်နာရသူများဖြစ်ပါသည်။
တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်အပါအဝင် တရားရုံးအဆင့်အားလုံးတွင် လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိပြီး တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေများကောင်စီ အက်ဥပဒေ(၁၉၂၆)ကို လိုက်နာရသူများ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ရှေနေလိုက်သူများအက်ဥပဒေပါပြဌာန်းချက်များသည်လည်း တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေများ အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိပါသည်။
၄။ ရှေ့နေတွေက ကျွန်တော့်အခက်အခဲကိုကူညီနိုင်ပါ့မလား?
ရှေ့နေမှ သင့်အား သင်၏ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေး၊ သင့်အခြေအနေနှင့်သက်ဆိုင်သော ဥပဒေများကို နားလည် သဘောပေါက် အောင် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
ရှေ့နေမှ သင့်အား ဥပဒေကြောင်းအရ ရွေးချယ်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုများ၊ ယင်းသို့ဆောင်ရွက်ခြင်းမှ ရရှိလာနိုင်သော အကျိုးရလဒ်များကို အကြံပေးနိုင်ပါသည်။
သင်ကိုယ်တိုင် သင့်အပေါ်စွဲဆိုထားသောပြစ်မှုကို ကျူးလွန်ထားမိသည်ဟု ယုံကြည်ပြီး အပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံလိုသည့် အခြေအနေမျိုးတွင်ပင်လျှင် ရှေ့နေရှေ့ရပ်ငှားရမ်းသင့်ပါသည်။ သို့မှသာ ယင်းသို့ အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံလိုက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တလျှောက်လုံးတွင်လည်းကောင်း၊ သို့မဟုတ် အမှုရင်ဆိုင်နေရစဉ် ကာလတလျှောက်တွင်လည်းကောင်း သင့်အခွင့်အရေးများကို တလေးတစားရှိစေအောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၅။ ပါရာလီဂယ် (paralegal) ဥပဒေအထောက်အကူပေးသူ ဆိုတာဘယ်သူလဲ?
ပါရာလီဂယ်ဆိုသည်မှာ အားပေးကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ ညှိနှိုင်းဖြန်ဖြေဆောင်ရွက်ပေးခြင်း အစရှိသည့် ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် ပတ်သတ်ပြီး သင်တန်းပေးခြင်းခံထားရသူများဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့သည် ရှေ့နေများ မဟုတ်ကြပါ။
ပါရာလီဂယ်များမှ ဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ရရှိနိုင်သောကုစားမှုများနှင့်ပတ်သတ်သော သတင်းအချက် အလက်များကို ပေးနိုင်ပါသည်။ ဒေသဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ နယ်ခံအဖွဲ့အစည်းများတွင်လည်း သင့်ကိုယ်စား ဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါသည်။
ပါရာလီဂယ်များမှ အရည်အချင်းပြည့်မီသော ရှေ့နေများကို ဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့သည် မည်သည့်ကိစ္စရပ်တွင်မဆို ရှေ့နေများကို အစားထိုးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ဥပမာ- သင့်အား ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးခြင်း၊ တရားရုံးတွင် လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးခြင်းများကို အရည်အချင်းပြည့်မီသော ရှေ့နေများကိုသာ ဆောင်ရွက်စေသင့် ပါသည်။
၆။ ပြစ်မှု၊ ရာဇဝတ်မှုနဲ့ တရားစွဲဆိုခံရတဲ့အခါ ရှေ့နေငှားရမ်းခွင့်ဆိုတာ ဘယ်လိုအခွင့်အရေးတွေလဲ?
ရာဇဝတ်မှုတိုင်းတွင် စွပ်စွဲခံရသူတိုင်းတွင် ရှေ့နေဖြင့် ခုခံချေပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။
ရှေ့နေဌားရမ်းခွင့်တွင်စတင်ဖမ်းဆီးပြီးနောက် ၂၄နာရီကာလအပါအဝင် ဖမ်းဆီးခံထားရစဉ် ကာလအတွင်း ရှေ့နေနှင့် သီးခြားတွေ့ဆုံခွင့်ပါ ပါဝင်သည်။
အကယ်၍ စွပ်စွဲခံထားရသောအမှုသည် သေဒဏ်ထိုက်သင့်သော ပြစ်မှုမျိုးဖြစ်ပါက စွပ်စွဲခံရသူအတွက် ရှေ့နေ တစ်ဦးကို နိုင်ငံတော်မှ အခမဲ့ငှားရမ်းပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၇။ ရှေ့နေတွေကို ဘယ်လိုရှာရမလဲ?
ရှေ့နေလမ်းညွှန်သို့သွားရန် ဤနေရာ ကိုနှိပ်ပါ။
သင့်အနေဖြင့် တတ်နိုင်သမျှ အစောလျှင်ဆုံး ရှေ့နေငှားရမ်းသင့်ပါသည်။
ရာဇဝတ်မှုများတွင် သင့်အနေဖြင့် ဖမ်းဆီးခံသည့် အချိန်မှစ၍ ရှေ့နေငှားရမ်း ခုခံချေပပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။
ဥပဒေအကျိုးဆောင်ပေးခြင်းကို စောလျင်သမျှ စောလျှင်စွာ ရရှိခြင်းအားဖြင့် အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိပါသည်။ အထူးသဖြင့် ရာဇဝတ်မှုများတွင် စောလျှင်စွာ ဥပဒေအကူအညီရရှိခြင်းအားဖြင့် သင့်အပေါ်တွင်စွဲဆိုထားသော စွဲဆိုချက်များကို ရုပ်သိမ်းပေးခြင်း၊ အာမခံဖြင့် လွတ်မြောက်ခွင့်ရခြင်း၊ အစရှိသည်တို့အပြင် ရဲများ၏ မလျော်ကန်သော အပြုအမူများမှလည်း အကာအကွယ်ရရှိနိုင်ပါသည်။
၉။ ကျွန်တော်နဲ့အတူ ပူးတွဲစွပ်စွဲခံရတဲ့သူနဲ့ ရှေ့နေအတူတူငှားသင့်ပါသလား?
အကယ်၍ အမှုတစ်ခုတွင် စွပ်စွဲခံရသူတစ်ဦးထက် ပိုမိုပါဝင်ပါက စွပ်စွဲခံရသူတစ်ဦးလျှင် သီးခြားရှေ့နေတစ်ဦးစီဖြင့် ခုခံချေပသင့်ပါသည်။
အစကနဦးတွင် အကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခဖြစ်ခြင်းမရှိဟု ထင်ရသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ- စွပ်စွဲခံရသူတစ်ဦးအတွက် ဝန်ခံလိုက်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည့် အခြေအနေတွင် အခြားပူးတွဲ စွပ်စွဲခံရသူအတွက် အမှုကိုဆက်လက်ရင်ဆိုင်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်နေနိုင်ပါသည်။
၁ဝ။ ရှေ့နေတစ်ဦးရဲ့ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားက ဘာတွေလဲ?
သင့်၏ရှေ့နေအနေဖြင့် သင့်၏ အကျိုးစီးပွားကို တတ်စွမ်းသမျှ၊ ဖြစ်နိုင်သမျှ အကျိုးဆောင်ရွက်ပေးရမည် ဖြစ်သည့် အပြင် ယင်းသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် ရှေ့နေကျင့်ဝတ်သိက္ခာကိုသာမက ဥပဒေအရ တာဝန်ဝတ္တရားများကိုလည်း လိုက်နာ စောင့်ထိမ်းရပါမည်။
ရှေ့နေများသည် မိမိကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ အခြားသူကိုလည်းကောင်း တရားရုံးတော်သို့ လိမ်လည်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့် အထင်အမြင်မှားအောင်ပြလုပ်ခြင်းများ မပြုရပါ။
ရှေ့နေများအနေဖြင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုအပါအဝင် အခြားသောအကျင့်ပျက်ခြစားမှုများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုရပါ။
ရှေ့နေများ၏ မလျော်ကန်သောအပြုအမူများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပိုမိုသိရှိလိုပါက မေးခွန်းနံပါတ် ၁၈ ကျွန်တော့်ရှေ့နေကို တိုင်ကြားလို့ရပါသလား? တွင်ကြည့်ပါ။
ရှေ့နေတစ်ဦးအနေဖြင့် အမှုတစ်ခုချင်းစီ၏ အချက်အလက်များနှင့် သက်ဆိုင်သောဥပဒေများကို လေ့လာထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
ရှေ့နေတစ်ဦးအနေဖြင့် အမှုတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော အချက်အလက်ပေါ်မူတည်ပြီး ဥပဒေများကို လက်တွေ့ အသုံးချရန် လိုအပ်သကဲ့သို့ အမှုသည်အား အကောင်းဆုံးဖြစ်မည့် ဆောင်ရွက်ချက်နှင့် ဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိသော ရလဒ်များကို အကြံပေးရန် တာဝန်ရှိပါသည်။
ကလေးသူငယ်များအတွက် လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးရသည့်အခါ၊ ရှေ့နေအနေဖြင့် ထိုကလေးငယ်နားလည် နိုင်မည့် စကားလုံးအသုံးအနှုန်း၊ သဘောတရားများဖြင့် ဥပဒေဆိုင်ရာအခြေအနေများကို အချိန်ယူရှင်းပြပေးသင့် ပါသည်။
တရားရုံးတွင် အမှုရင်ဆိုင်သည့်အခါ သက်သေခံအထောက်အထားများကို တင်သွင်းခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်း၊ အမှုသည် အတွက် သက်သေများကို တင်သွင်းစစ်ဆေးပေးခြင်း၊ တဘက်မှတင်သွင်းလာသော မျက်မြင်သက်သေများကို ပြန်လှန် မေးခွန်းထုတ် စစ်မေးခြင်း၊ လိုအပ်ပါက ကန့်ကွက်မှုများပြုလုပ်ပေးခြင်းတို့ကို ရှေ့နေမှဆောင်ရွက်ပေးပါလိမ့်မည်။
ကြားနာစစ်ဆေးမှုတိုင်းတွင် ရှေ့နေရှိနေရန်လိုအပ်ပြီး၊ လိုအပ်သော တရားရုံးစာရွက်စာတမ်းများကို ရရှိအောင်နှင့် အမှုသည်အတွက် မိတ္တူရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးရပါမည်။
ရှေ့နေတစ်ဦးအနေဖြင့် အထောက်အထားများကို စစ်ဆေးခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ အခင်းဖြစ်နေရာများသို့ သွားရောက် လေ့လာခြင်း၊ မျက်မြင်သက်သေများကို သွားရောက်တွေ့ဆုံခြင်းများ၊ စသည့်လိုအပ်သည့် စုံစမ်းမှုများကို ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိပါသည်။
ရှေ့နေများတွင် အမှုသည်ကိုပြန်လည်အကြောင်းကြားပေးရန်နှင့် အမှု၏ အခြေအနေတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး နောက်ဆုံးရောက်ရှိနေသော အခြေအနေကို ပြောပြပေးရန် တာဝန်ရှိသည်။
ရှေ့နေတစ်ဦးအနေဖြင့် အမှုသည်နှင့်အမှု၏အချက်အလက်များ၊ အမှုသည်နှင့်ပြောဆိုဆက်ဆံမှုများကို မပေါက်ကြား အောင်၊ လုံခြုံစိတ်ချရအောင် ထိန်းသိမ်းပေးရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ မေးခွန်းအမှတ် ၁၁း ရှေ့နေမှ သတင်းအချက် အလက်တွေ မပေါက်ကြားအောင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးရမည့် တာဝန်ဆိုတာဘာလဲ? ကိုကြည့်ပါ။
၁၁။ ရှေ့နေမှ သတင်းအချက်အလက်တွေ မပေါက်ကြားအောင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးရမည့် တာဝန် ဆိုတာ ဘာလဲ?
ရှေ့နေတစ်ဦးအနေဖြင့် အမှုသည်နှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များကို မပေါက်ကြားရလေအောင် အမှုနှင့် သက်ဆိုင်သော စာရွက်စာတမ်းများကို လုံခြုံအောင်သိမ်းဆည်းထားခြင်း၊ အမှုသည်နှင့်ရှေ့နေ နှစ်ကိုယ်ကြား ပြောဆိုဆက်သွယ်မှုများကို ထုတ်မပြောခြင်း၊ အစရှိသဖြင့် လုံခြုံအောင်ထိမ်းသိမ်းထားရန် တာဝန်ရှိပါသည်။
ရှေ့နေမှ အမှုသည်တစ်ဦးအတွက် လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေစဉ်ကာလအတွင်း လျှို့ဝှက်စွာထိန်းသိမ်းထားရမည့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုများကို ထိုရှေ့နေမှ ထုတ်ဖော်ပြောကြားလာအောင် အတင်းအကြပ်ပြုလုပ်ခွင့်မရှိပါ။
ယင်း မူသဘောတရားတွင် ချွင်းချက်အနည်းငယ်သာရှိပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ
သင့်အနေဖြင့် ဥပဒေနှင့်ဆန့်ကျင်သော ပြုလုပ်မှုများ ကိုကျူးလွန်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုချက်များကို အကာ အကွယ် ပေးမထားပါ။
ရှေ့နေငှားရမ်းပြီးနောက်မှ ကျူးလွန်လိုက်သောပြစ်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ထိုကျူးလွန်လိုက်သော ပြစ်မှုအသစ် အတွက် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များသို့ တိုင်ကြားရန် ရှေ့နေတွင်တာဝန်ရှိပါသည်။
အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် ရှေ့နေအားလျှို့ဝှက်လုံခြုံအောင်ထိန်းသိမ်းပေးထားရမည်ဟူသော စည်းကမ်းချက်ကို စာဖြင့်ရေးသားတရားဝင်စွန့်လွှတ်လိုက်ခြင်းသည်လည်း ချွင်းချက် ဖြစ်ပါသည်။
သင့်အနေဖြင့် အမှုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြောဆိုသောအခါ ရှေ့နေအပြင် အခြားသူများပါကြားသိနိုင်သည့် အခြေအနေ မျိုးတွင် အထူးသတိပြုပါ။
လျှို့ဝှက်လုံခြုံစွာဆက်သွယ်ပြောဆိုခွင့်သည် ရှေ့နေနှင့်အမှုသည်တို့ အကျဉ်းထောင်အတွင်း ပြောဆိုခြင်းအထိ အကျုံးဝင်ပါသည်။
ထို့အတူ စကားပြန်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ သင့်ရှေ့နေမှ သင့်အမှုအတွက်လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးရန် ခန့်အပ်ထားသော ဝန်ထမ်းရှေ့မှောက်တွင်လည်းကောင်း ပြောဆိုခြင်းများသည်လည်း လျှို့ဝှက်လုံခြုံအောင်ထားရှိပေးရမည့် သတင်းအချက် အလက်များဖြစ်ပြီး ယင်းအချက်အလက်များကို ဥပဒေမှ အကာအကွယ်ပေးထားပါသည်။
ဖြစ်နိုင်ပါက ရှေ့နေနှင့်တစုံတရာဆက်သွယ်ပြောကြားခြင်းမပြုမီ သင့်ရှေ့နေအား ယခုဆက်သွယ် ပြောကြားမှု များကို အခြားသူများမသိအောင် လျှို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းထားရှိပေးစေလိုကြောင်း ဦးစွာအတည်ပြု အသိပေးသင့်ပါသည်။
၁၂။ အကျိုးစီးပွား ပဋိပက္ခဖြစ်ခြင်း ဆိုတာ ဘာလဲ?
ရှေ့နေတစ်ဦးသည် အချင်းဖြစ်ပွားနေသော အမှုသည်နှစ်ဘက်လုံးအတွက် အမှုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးသည့်အခါ အကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခ ပေါ်ပေါက်လာပြီး ယင်းသို့ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းကို တားမြစ်ထားပါသည်။
ရှေ့နေတစ်ဦးအနေဖြင့် ၎င်းကိုငှားရမ်းထားသော အမှုသည်ထံမှသာ ညွှန်ကြားချက်ကို ရယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ တည်ဆဲဥပဒေများက တားမြစ်ထားခြင်းမရှိသော်လဲ စွပ်စွဲခံရသူအများအပြားပါဝင်နေသော အမှုများတွင် ရှေ့နေတစ်ဦးသည် စွပ်စွဲခံရသူ တစ်ဦးတည်းအတွက်ကိုသာ လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပါသည်။
၁၃။ ရှေ့နေထံမှ ဘာတွေကိုမျှော်လင့်နိုင်သလဲ?
အကယ်၍ ရှေ့နေမှ သင့်အမှုအတွက် လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးသည်ကို သဘောတူပါက ရှေ့နေမှ သင့်အား ရှေ့နေ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာကို လက်မှတ်ထိုးစေမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းစာသည် သင်(အမှုသည်)နှင့် ရှေ့နေအကြား ရေးသား ထားသော ကတိပဋိဉာဉ်ပင်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်အဆိုပါ ရှေ့နေကိုယ်စားလှယ်လွှဲစားကို သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးသို့ တင်သွင်းမည်ဖြစ်ပါသည်။
ရှေ့နေမှ အောက်ပါတို့ကိုလည်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားလိမ့်မည် ဖြစ်ပါသည်။
အမှုသည်မှာ ဆက်သွယ်လာပါက ပြန်လည်အကြောင်းကြားပေးခြင်း၊ အမှု၏တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုနှင့် နောက်ဆုံး ရောက်ရှိနေသော အခြေအနေများကို ပြောပြခြင်း
လာမည့်ရုံးချိန်းအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ရုံးချိန်းပြီးနောက် ရှေ့ဆက်ဖြစ်ပေါ်လာမည့်အရာများကို ရှင်းပြခြင်း
အမှုတွဲအပါအဝင် သင့်အမှုနှင့်သက်ဆိုင်သော စာရွက်စာတမ်းများကို ရယူခြင်း
တရားရုံးအမိန့်များ၊ ရှေ့နေကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာများအပါအဝင ်အမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောစာရွက်စာတမ်း အထောက် အထားများ၊ လုံခြုံစိတ်ချရသောနေရာတွင် သိမ်းဆည်းထားရှိခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍သင်သည် ရဲအချုပ်တွင်ရောက်ရှိနေပါက၊ သင့်ရှေ့နေအနေဖြင့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသမျှ သင်လတ်တလော လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကို အရေးဆိုပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ရှေ့နေတစ်ယောက်၏ ဝတ္တရားမှာ ၎င်း၏အမှုသည်ဖြစ်သူ သင့် ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်မှုများ ပြုလုပ်ရာတွင် အချက်အလက် ပြည့်စုံမှန်ကန်စွာရှိရေးအတွက် ကူညီပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ရှေ့နေတစ်ဦးအနေဖြင့် အမှုသည်ဗဟိုပြု ဆောင်ရွက် သင့်ပြီး သင့်ထံမှသာ ညွှန်ကြားချက်များကို ရယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။
သို့သော် အချို့သော သင့်ညွှန်ကြားချက်များကို အဘယ်ကြောင့် ဆောင်ရွက်လိမ့်မည် သို့မဟုတ် ဆောင်ရွက် နိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်းရှင်းပြရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဥပမာ- ယင်းညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ဥပဒေ လမ်းကြောင်းမရှိခြင်း၊ သို့မဟုတ် ယင်းညွှန်ကြားချက်သည် ဥပဒေနှင့်ဆန့်ကျင်နေခြင်း။.
၁၄။ ရှေ့နေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ ဘာတွေပြင်ဆင်ထားသင့်သလဲ?
သင် သို့မဟုတ် သင့်ကိုယ်စားဆောင်ရွက်ပေးသူအနေဖြင့် အမှုနှင့်သက်ဆိုင်သော အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်း များကို ရှေ့နေအားပေးနိုင်ရန် စုဆောင်းထားသင့်ပါသည်။
ရှေ့နေနှင့်တွေ့ဆုံသည့်အခါ သင်သိလိုသော (သို့မဟုတ် ဖြေရှင်းလိုသော) မေးခွန်းများ၊ စိုးရိမ်မိသော အချက်များကို ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါသည်။
အသင့် အရေးကိစ္စအခြေအနေများကို ရိုးရိုးသားသား၊ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း၊ အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် ရှင်းပြနိုင်ရန် အတွက် ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါသည်။
၁၅။ ရှေ့နေကို ဘာတွေပြောသင့်သလဲ?
သင်၏ ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေး၊ တာဝန်ဝတ္တရားများကိုသာမက သင့်တွင် ဥပဒေအရ ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသော အရာများ ကိုပါ ရှေ့နေအား မေးမြန်းသင့်ပါသည်။
သင်ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ရာတွင် အချက်အလက်ပြည့်စုံစွာ ရရှိစေရန်အတွက် သင်လက်တွေ့ရွေးချယ် ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်သောအရာများကို ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ရရှိလာနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူး၊အန္တရယ်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး သင့်ရှေ့နေ၏ ဥပဒေဆိုင်ရာ ထင်မြင်ချက်ကို ရှင်းပြစေပါ။
သင့်အမှုတွင် အကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခဖြစ်ခြင်း ရှိမရှိ သင့်ရှေ့နေကို မေးမြန်းသင့်ပါသည်။ ယင်းတွင် သင့်ရှေ့နေသည် သင့်အမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောသူများ (သင့်အမှုတွင်သက်သေအဖြစ်ပါလာနိုင်ချေရှိသောသူများ)ကိုအမှုလိုက်ပါ ဆောင်ရွက် ပေးနေခြင်း သို့မဟုတ် အမှုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးဖူးခဲ့ခြင်း ရှိမရှိ မေးမြန်းသင့်ပါသည်။
အကယ်၍ သင်မှ ရှေ့နေတစ်ဦးအား သင့်အမှုအတွက် လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးသည်ကို သဘောတူပါက သင့်အနေဖြင့် ရှေ့နေကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာကို လက်မှတ်ထိုးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းစာသည် သင်(အမှုသည်)နှင့် ရှေ့နေအကြား ရေးသားထားသော ကတိပဋိဉာဉ်ပင်ဖြစ်သည်။
ရှေ့နေမှလည်း သင့်အတွက် တရားရုံးတွင်အမှုလိုက်ပါဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ရှေ့နေကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာကို တရားရုံးသို့ တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။
တရားရုံးသို့တင်သွင်းပြီးဖြစ်သော ရှေ့နေကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာသည် အမှုပြီးဆုံးသည်အထိလည်းကောင်း၊ ရှေ့နေ သို့မဟုတ် အမှုသည် သေဆုံးသည်အထိ လည်းကောင်း အကျိုးသက်ဝင်ပါသည်။
အမှုသည်မှဖြစ်စေ၊ ရှေ့နေမှဖြစ်စေ အမှုမှ ရှေ့နေကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာကို ရုပ်သိမ်းခွင့်ပြုပါရန် ရေးသားလျှောက်ထား လာပါက တရားရုံးအနေဖြင့် ရှေ့နေကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာကို ရုပ်သိမ်းခွင့်ပြုနိုင်သည်။
၁၇။ အကယ်လို့ ရှေ့နေက ကျွန်တော့်ကို အဆက်အသွယ်မလုပ်တော့ရင် ဘာလုပ်ရမလဲ?
ရှေ့နေများတွင် အမှုသည်ကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပေးရန် တာဝန်ရှိပါသည်။
ရှေ့နေများတွင် အမှုသည်ကို အမှု၏ အခြေအနေတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး နောက်ဆုံးရောက်ရှိနေသော အခြေအနေကို ပြောပြပေးရန် တာဝန်ရှိသည်။
သင့်အား သင့်ရှေ့နေမှ ကာလအတန်ကြာသည်အထိ ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားခြင်းမရှိပါက သို့မဟုတ် တင်သွင်း ရမည့် နောက်ဆုံးရက် သို့မဟုတ် ကြားနာရန်ရုံးချိန်း နီးကပ်လာပါက သင့်ရှေ့နေကို အမြန်ဆုံး အကြောင်းကြားသင့် ပါသည်။ ထို့အပြင် ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကို မှတ်သားထားပါ။ လိုအပ်ပါက တိုင်ကြားနိုင်ရန် စဉ်းစားသင့်ပါသည်။
၁၈။ ကျွန်တော့်ရှေ့နေကို တိုင်ကြားလို့ရပါသလား?
သင့်ရှေ့နေ၏ လုပ်ရည်ကိုင်ရည် အရည်အချင်းနှင့် ၎င်း၏အခြားသော အပြုအမူများကို စိုးရိမ်မှုရှိပါက ယင်းရှေ့နေကို ထုတ်ပယ်နိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ သင်နှင့် သင့်ရှေ့နေအကြား သဘောထားကွဲလွဲမှုများရှိပါက ၎င်းအား အခြေအနေကို သင့်ကို ထပ်မံ ရှင်းပြစေပါ။ အမှုသည်တစ်ဦးအနေဖြင့် သင်သာလျှင် အပြီးသတ်ဆုံးဖြတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
သို့သော် ရှေ့နေတစ်ဦးအနေဖြင့် ရှေ့နေကျင့်ဝတ်သိက္ခာနှင့်ဆန့်ကျင်သော သို့မဟုတ် ဥပဒေနှင့်ဆန့်ကျင်သော ကိစ္စရပ် များကို ဆောင်ရွက်ပေးလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
ရှေ့နေကျင့်ဝတ်သိက္ခာ ပျက်ယွင်းမှုများအတွက် တိုင်ကြားမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာပျက်ယွင်းမှုများတွင် အလွန်အမင်းဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ပြုခြင်း၊ မဟုတ်မမှန်တိုင်စာပစ်စာရေးသားခြင်း၊ အခြားတနည်းနည်းဖြင့် ရှေ့နေအဖြစ် လိုက်ပါ ဆောင်ရွက်ရန် မသင့်တော်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။
အကယ်၍ရှေ့နေသည် တရားလွှတ်တော်ဖြစ်ပါက တိုင်ကြားစာကို ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်သို့ လျှောက်ထား နိုင်ပါသည်။ အထက်တန်းရှေ့နေများအတွက် အဆင့်နိမ့်တရားရုံးများတွင် တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်။
မည်သို့သောရှေ့နေအမျိုးအစားပင် ဖြစ်စေကာမူ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်တွင် အပြီးသတ်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် ရှိပြီး ရှေ့နေလိုင်စင်ကို ထာဝရပိတ်သိမ်းနိုင်သည်အထိ အရေးယူနိုင်ပါသည်။